Taliska guud ee ciidamada iyo gobolka Banaadir oo maanta ka shiray amniga Muqdisho – Maxaa soo kordhay? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Taliska guud ee ciidamada iyo gobolka Banaadir oo maanta ka shiray amniga Muqdisho – Maxaa soo kordhay?
June 10, 2021 at 18:57 Taliska guud ee ciidamada iyo gobolka Banaadir oo maanta ka shiray amniga Muqdisho – Maxaa soo kordhay?2021-06-10T18:57:54+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Muqdisho (Caasimada Online)- Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlayay amniga caasiamda dalka.
The post Taliska guud ee ciidamada iyo gobolka Banaadir oo maanta ka shiray amniga Muqdisho – Maxaa soo kordhay? appeared first on Caasimada Online.
« Raadsan oo guul ka gaartay kooxda Geeska Africa kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League
Rooble oo soo saaray dalab DEG-DEG ah oo la xiriira guddiyada doorashooyinka »